Archives iskuulada »Jaamacadda Hodges
Associate Dean Tracey Lanham waxay hogaamisaa wadada loo maro teknolojiyadda ee jaamacada Hodges Associate Dean Tracey Lanham waxay safka hore kaga jirtaa casuumaada haweenka inay kusoo biiraan cilmiga teknolojiyada iyagoo u keenaya gabdhaha barnaamijyada dugsiga dhexe iyo sare. Taasi waa sababta professor Lanham ay ugu lug leedahay NCWIT halkaas oo ay si hagar la'aan ah uga shaqeyso sidii ay u keeni lahayd [...]	Read More
Nolosha kambuyuutar, Dugsiyada
Kooxda Fulinta ee Jaamacadda Hodges waxay u dabaaldegaysaa Dhaqdhaqaaqa Kuraasta Cas (LR) Teresa Araque, Suuqgeynta AVP / PIO; Dr. John Meyer, Madaxweynaha; Erica Vogt, Madaxa Fulinta ee Hawlgallada Maamulka; Tracey Lanham, Associate Dean, Fisher School of Technology; iyo Dr. Marie Collins, VP Sare ee Arimaha Tacliinta. Sida laga soo xigtay sitwithme.org, Dhaqdhaqaaqa Kuraasta Cas waxaa sidoo kale loo yaqaan Sit With [...]	Read More